Maqaallada Yuliia Mamonova Martech Zone |
Maqaallada by Yuliia Mamonova
Iyadoo 5+ sano ku jirta suuq-geynta dhijitaalka ah, Yuliia ayaa wadda Liin dhanaanKoritaankeeda iyada oo si toos ah u qoran iyo fariimaha cad. Qora iyo cilmi-baaraha wadnaha, Yuliia waxay fahamsan tahay sida loola macaamilo akhristaha oo loo dhiso sheeko soo bixi doonta. Yuliia waxay qortay in ka badan 1500+ xabbadood dhowrkii sano ee la soo dhaafay oo dib u qaabaynta adduunka FinTech, bilawga, iyo suuqgeynta nuxurka iyada oo leh xirfadaheeda.
Dib-u-soo-celinta: Sida Is-beddelka u-ku-soo-noqoshada uu u korin doono Summada Shirkaddaada
Jimco, Oktoobar 29, 2021 Jimco, Oktoobar 29, 2021 Yuliia Mamonova
Waxay ku socotaa iyada oo aan la sheegin in dib-u-samaynta ay u soo saari karto natiijooyin wanaagsan oo wanaagsan ganacsiga. Waxaadna ogtahay in tani run tahay marka shirkadaha ku takhasusay samaynta sumadaha ay yihiin kuwa ugu horreeya ee dib u soo saara. Qiyaastii 58% wakaaladaha ayaa dib u sumadeeya si ay kor ugu qaadaan kobaca la taaban karo iyada oo loo marayo aafada COVID. Ururka Ganacsiga ee Wakaalada Xayeysiiska Anaga oo ah Lemon.io si toos ah ayaanu ula kulanay inta magac dib u habeynta iyo matalida joogtada ah ay kaa hor marin karto tartankaaga. Si kastaba ha ahaatee,
Friday, October 29, 2021 Friday, October 29, 2021